Izinselelo Zebhizinisi Namathuba Wobhadane LWE-COVID-19 | Martech Zone
Izinselelo Zebhizinisi Namathuba Wobhubhane lwe-COVID-19
NgoLwesibili, Okthoba 6, 2020 NgoLwesibili, Okthoba 6, 2020 Douglas Karr
Sekuyiminyaka eminingana ngibeke ukuthi ushintsho ukuphela kwalo njalo abathengisi okufanele bakhululeke kulo. Izinguquko kwezobuchwepheshe, izindlela zokuxhumana neziteshi ezengeziwe zonke izingcindezi zezinhlangano zokuzivumelanisa nezidingo zabathengi nezamabhizinisi.
Eminyakeni yamuva nje, izinkampani nazo beziphoqeleka ukuba ziveze obala futhi zibe nobuntu emizameni yazo. Abathengi namabhizinisi baqala ukwenza amabhizinisi ukuze ahambisane nezinkolelo zabo zokupha kanye nokuziphatha. Lapho izinhlangano zazivame ukwehlukanisa izisekelo zazo ekusebenzeni kwazo, manje okulindelwe ukuthi inhloso yenhlangano ngukuthuthuka komphakathi wethu kanye nokunakekela imvelo yethu.
Kepha ubhadane nokukhiya okuhambisanayo kuye kwaphoqa uguquko olungalindelekile ebesingalulindelanga. Abathengi abake baba namahloni ukwamukela i-e-commerce bathutheleka kuyo. Izindawo zomphakathi ezifana nezindawo zemicimbi, izindawo zokudlela, nezamabhayisikobho ama-movie kumise ukusebenza - abaningi baphoqeleka ukuvala ngokuphelele.
Ukuphazanyiswa Kwebhizinisi le-COVID-19
Kunezimboni ezimbalwa ezingaphazanyiswa njengamanje ngubhadane, ukuhlehla kwezenhlalo, kanye nokushintsha kokuziphatha kwabathengi nokuziphatha kwebhizinisi. Ngizibonele mathupha ukuguquka okukhulu namakhasimende kanye nozakwethu:
Osebenza naye embonini yensimbi wabona amakhondomu kanye nokuma okudayisa kanye nezinqolobane ze-ecommerce kuqhuba konke ukukhula kwe-oda lakhe.
Ozakwethu embonini yesikole kudingeke ukuthi aqhube konke ukuthengisa kwabo aqonde ngqo kubathengi njengoba izikole zishintshela ku-inthanethi.
Ozakwethu embonini yezentengiselwano yezezakhiwo kudingeke ukuthi ahlasele ahlele kabusha izikhala zawo ukuze zikwazi ukumelana nezikhathi zomsebenzi eziguquguqukayo lapho abasebenzi bamukelekile khona ukusebenza ekhaya.
Ozakwethu abambalwa embonini yokudlela bavale amakamelo abo okudlela futhi bathuthela kokuthengisa nokuphuma kwezidingo kuphela.
Osebenza naye kwakudingeka ahlele kabusha i-spa yakhe izivakashi ezingashadile kuphela ngokuhlanza amawindi phakathi kwamakhasimende. Senze isixazululo esigcwele se-ecommerce nokuhlela futhi saqala ukumaketha okuqondile, ukumaketha nge-imeyili namasu okusesha wendawo - into angakaze ayidinge ngaphambili ngoba wayenebhizinisi eliningi lezwi.
Ozakwethu embonini yokuthuthukisa ikhaya ubuke abahlinzeki benyusa amanani nezisebenzi ezidinga imali ethe xaxa ngoba isidingo sokwenza ngcono ikhaya (lapho sihlala khona manje futhi work) atshalwe kakhulu.
Ngisho ne-ejensi yami entsha bekufanele ikuvuselele ngokuphelele ukuthengisa kwayo nokumaketha. Ngonyaka odlule, sisebenze kakhulu sisiza amabhizinisi ngokwamanani aguqule ulwazi lwabo lwamakhasimende. Kulo nyaka, kumayelana nokuzenzakalela kwangaphakathi, ukusebenza kahle, nokunemba kwedatha ukunciphisa umthwalo womsebenzi kubasebenzi abangazange badilizwe.
Lokhu infographic kusuka mobile360, umhlinzeki we-SMS ongabizi wamabhizinisi amancane, aphakathi nendawo, namakhulu abonisa umthelela wesifo esiwumshayabhuqe nokuvaleka kweziqalo, ezamabhizinisi nezamabhizinisi ngokuningiliziwe.
Umthelela Omubi Wezomnotho we-COVID-19
Ngaphezu kwama-70% okuqala kudingeke ukuthi anqamule izinkontileka zabasebenzi besikhathi esigcwele selokhu kuqale ubhadane.
Ngaphezulu kwama-40% okuqala anemali eyanele kuphela inyanga eyodwa noma ezintathu zokusebenza.
I-GDP ithole inkontileka engu-5.2% ngowezi-2020, okuyenza ibe wukwehla kwezomnotho okujulileyo emhlabeni wonke emashumini eminyaka.
Amathuba Ebhizinisi e-COVID-19
Yize amabhizinisi amaningi esenkingeni enkulu, kukhona amathuba athile. Lokho akukhona ukukhanyisa ubhadane - olwesabekayo impela. Noma kunjalo, amabhizinisi awakwazi ukumane aphonse ithawula. Lezi zinguquko ezimangazayo esimeni sebhizinisi azikaze zomise konke ukufunwa - kungukuthi amabhizinisi kufanele azungeze ukuze azigcine ephila.
Amanye amabhizinisi abona ithuba lokushintsha ukuthi asebenza kanjani:
Ukwamukela imodeli yokupha ngokunikela ngezinto ezidingekayo nenzuzo kulabo abaswele.
Ukuvuselela imisebenzi ukusizakala ngesibalo sabantu abasebenza ekhaya abadinga ukulethwa kokudla nempahla.
Ukukhuthaza ukumaketha kususe ukufunwa kusuka ekushayeleni ukuthengiswa okuya ekuvakasheni kwedijithali ngokuhlela online, i-ecommerce, nezinketho zokulethwa
Ukwenza kube lula ukukhiqiza ukuhlinzeka ngempahla yokuhlanzeka nemishini yokuzivikela yomuntu siqu.
Ukuguqula izindawo zokusebenza ezivulekile zibe nezikhala ezine-distancing ephephile nezizimele, izingxenye ezihlukanisiwe ukunciphisa ukuxhumana nomphakathi.
Ukwazi ukuthi uzophendula kanjani kulesi simo kuzokwenza inkampani yakho ikwazi ukudlula kulolu bhubhane. Ukuze uqalise, umhlahlandlela ongezansi uzoxoxa ngezinselelo ozobhekana nazo noma okungenzeka ukuthi uke wabhekana nazo namathuba okufanele ucabange ukuwathatha.
Ezamabhizinisi phakathi kwe-COVID-19: Izinselelo namathuba
Izinyathelo Ezi-6 Zokuvuselela Ibhizinisi Lakho
Amabhizinisi kufanele ajwayele futhi amukele, uma kungenjalo azosala ngemuva. Ngeke siphinde sibuyele ekusebenzeni kwangaphambi kuka-2020 njengoba amabhizinisi abathengi nokuziphatha eguquke unomphela. Nazi izinyathelo eziyi-6 ezinconywe yi-Mobile360 ukukusiza ukuthi unqume ukuthi iqembu lakho lingenzani ukuze liqhubeke nezinkambiso zamanje:
Izidingo Zamakhasimende Okucwaninga - thatha ungene ngokujulile kumakhasimende akho. Khuluma namakhasimende akho amahle futhi uthumele izinhlolovo zethu ukukhomba ukuthi ungasiza kanjani amakhasimende akho kangcono.
Yakha Abasebenzi Abaguqukayo - ukukhishwa kwabasebenzi kanye nosonkontileka kungaba yithuba elihle kakhulu lokunciphisa izimfuno zamaholo ezingaba nomthelela ekuhambeni kwemali kwenkampani yakho.
Imephu Khombisa Ukuthenga Kwakho - Cabanga ngokulinganiselwa kokusebenza ibhizinisi lakho elibhekene nakho. Uzohlela kanjani ukuphatha nokusebenza ngomthelela?
Dala Inani Elabelwe - Ngaphandle kokunikezwayo kwakho, xhumana ngoshintsho oluhle inhlangano yakho oluletha umphakathi wayo kanye namakhasimende akho.
Hlala Ubala - sebenzisa isu lokuxhumana elicacile nelinethemba eliqinisekisa ukuthi wonke umuntu ukhuphuka, wehla, futhi enhlanganweni yakho uyasiqonda isimo sebhizinisi lakho.
Inguquko Digital - Khulisa utshalomali lwakho kuzingxenyekazi zedijithali, ezishintshayo, ukuhlanganiswa, kanye nezibalo ukuze ukwandise ukusebenza kwakho. Ukusebenza kahle kwangaphakathi ngokuhlangenwe nakho kwamakhasimende kungakusiza unqobe futhi wandise nenzuzo njengoba amabhizinisi nabathengi ngokufanayo beguqula indlela abaziphatha ngayo.
Tags: ibhizinisii-covid-19gdpinfographici-lockdownizibalo zokhiyemobile360ubhubhaneizibalo zomqedazweSMS
Kungani Amaqembu Wokuthengisa Nokumaketha Adinga I-Cloud ERP
IFreshchat: Ingxoxo Enobunye, Yezilimi Eziningi, Ehlanganisiwe Nengxoxo Yesayithi Lakho